श्रीमान विदेशीएपछी गाउँमा श्रीमती कसरी गर्भवती ? - hamro Desh
श्रीमान विदेशीएपछी गाउँमा श्रीमती कसरी गर्भवती ?
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल बजारमा एक महिलालाई गाँउका पाँच पुरुषले पालैपालो यौनसम्बन्ध राखेर पारिवारिक सम्बन्ध भताभुङ्ग पारेका छन् ।श्रीमान विदेशमा भएकी देऊ कुमारी आर्चाय (नामपरिवर्तन) सँग गाँउकै ५ पुरुषले यौनसम्बन्ध राख्दा गर्भवती भएपछि उनको परिवारीक सम्बन्ध भताभुंग भएको हो । विदेशमा रहेका महिलाका श्रीमान घर आउँदा शंका लागेर स्वास्थ्य संस्था जाँदा उनी गर्भवती भएको खुलेको थियो।
अवैध सम्बन्धबाट पाँच महिनाअघि गर्भवती बनेकी महिलाका श्रीमानले घरबाट निकालिदिएपछि अहिले महिलाको बिचल्ली भएको छ । आफुमाथी श्रीमान नभएको बेला पाँच जना गाँउकै स्थानीयले शारिरिक सम्बन्ध राख्ने गरेको भन्दै महिलाले जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै अहिले आफ्नै जेठाजु र ससुराको नाममा लिखित जाहेरी दिएकी छन् ।
प्रहरीमा २ जनाविरुद्ध करणीको आरोपमा लिखित जाहेरी दिएकी देऊ कुमारीले गाँउसमाज भेला हुदाँ भने अन्य ३ जना समेतसँग नियमित शारिरिक सम्र्पक राख्दै आएको खुलेको छ । महिलाका अनुसार पति बिदेश गएपछि उनलाई लगातार स्थानीय ५ पुरुषले करणी गर्दै आएका थिए । उनीहरुमध्ये ४ जना आचार्य थरका र बाँकी १ जना परियार थरका रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
-सूचना केन्द्रबाट साभार